" အရာရာကို အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား ကိုယ့္ဘဝတိုးတတ္မည့္ လမ္းပဲရွာၿပီး ေဖာက္ေတာ့မယ့္ဆိုတဲ့ ေနျခည္ဦး " - Cele Gabar
ပုပ္ပါးက မျောက်လေးတွေအတွက် စားစရာတွေလှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
Facebook ပေါ်လာတာ သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ ထူးအယ်လင်း
အဆိုတော်မင်းခန့် ရဲ့ သီချင်းနားထောင်ပြီး ရည်းစားထားတော့မယ်ဆိုတဲ့ ချယ်ရီသင်း
ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ မြတ်သူသူရဲ့ ပထမဆုံး သီချင်းလေး
ပရိသတ်တွေအတွက် ပျော်စရာသတင်းလေးပေးလိုက်တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို
သေရမှာ မကြောက်ပေမယ့် မသေချင်သေးဘူးဆိုတဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ဦးမိုးဒီ
ပရိသတ်တွေရှေ့ကိုရောက်ရှိလာတော့မယ့် MRTV-4 မင်းသမီးလေး မြတ်သူသူရဲ့ ပထမဆုံး သီချင်းလေး
လောကကြီးရဲ့အပူတွေကိုစိတ်ကုန်မိလို့ သာသနာ့အရိပ်မှာ ခေတ္တခိုလှုံမယ်ဆိုတဲ့ ဇာဇာထက်
ကိုယ့်ကိုအပ်တဲ့ ကြော်ငြာလေးတစ်ခုမှာ A4ကျော်စွာကိုပါ ထည့်သုံးပေးခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
သမီးလေးနဲ့အတူစည်းချက်ညီညီကထားတဲ့ ချစ်စရာ Tik Tok လေးကိုမျှဝေလိုက်တဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်
Cele Gabar - The World of Celebrity
Cele Gabar TV
” အရာရာကို အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား ကိုယ့္ဘဝတိုးတတ္မည့္ လမ္းပဲရွာၿပီး ေဖာက္ေတာ့မယ့္ဆိုတဲ့ ေနျခည္ဦး “
“ပုရိသ” ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားၾကီးမွာ နိုင္ငံေက်ာ္မင္းသမီးၾကီးနဲ႔ အျပိဳင္သရုပ္ေဆာင္ထားကာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈ အခိုင္အမာရရိွေနတဲ့ ေနျခည္ဦး ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆံုး Beauty Blogger အျဖစ္ စတင္ခဲ့ကာ အနုပညာေလာကထဲကို၀င္ေရာက္လာသူျဖစ္ျပီး ထူးျခားတဲ့ အနုပညာစြမ္းရည္ေၾကာင့္လည္း တစ္ခဏအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။သူမကေတာ့ သရုပ္ေဆာင္သစ္တစ္ေယာက္လို႔ မထင္ရေလာက္ေအာင္ သရုပ္ေဆာင္ပီျပင္လြန္းတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ရဲ႕ ႏွစ္သက္အားေပးျခင္းခံေနရျပီး လတ္တေလာမွာေတာ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားၾကီးေတြမွာပါ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရိွထားပါတယ္။
သူမရဲ႕ ပထမဆံုးရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားၾကီးျဖစ္တဲ့ “ရန္သူ” ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွာလည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ တခဲနက္အားေပးမႈကို ရရိွခဲ့ပါတယ္။တက္သစ္သရုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမဲ့ ၀ါရင့္အနုပညာရွင္ေတြနဲ႔အျပိဳင္ အေကာင္းဆံုး သရုပ္ေဆာင္နိုင္မႈေၾကာင့္ “ဧည့္သည္” ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားၾကီးဟာဆိုရင္လည္း ရံုျပည္ရံုလွ်ံ အားေပးျခင္းခံခဲ့ရပါေသးတယ္။သူမကေတာ့ သူမရဲ႕အလွကို ယံုၾကည္မႈရိွသလို မိန္းကေလးေတြကိုလည္း ယံုၾကည္မႈရိွရိွနဲ႔လွေစဖို႔ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို ေ၀မွ်တတ္သူ Beauty Blogger ကာင္းတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ေနျခည္ဦးကေတာ့ တစ္ခုခုကို အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား ကိုယ့္ဘဝကို ဒီထက္ပိုတိုးတက္ေအာင္ လမ္းရွာၿပီး ေဖာက္ရမွာကို “ဪ ကိုယ့္ျဖစ္ရပ္ ကိုယ္ေတြးၿပီးတရားရလို႔ပါ။ကိုယ့္အသိုင္းအဝိုင္း နယ္ပယ္မွာ အရွိန္အဝါေလးရလာတိုင္း မာန္တက္ေနလို႔ မရဘူးဟ။ ကိုယ့္စက္ဝန္းေလးက ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ ႀကီးရင္ႀကီးေနမွာေပါ့ ဒါေပမယ့္ စၾကာဝလာနဲ႔ မနိႈင္းနဲ႔ဦး ဒီရပ္ကြက္ ဒီၿမိဳ႕ ဒီတိုင္း ဒီႏိုင္ငံကထြက္သြားရင္ ကိုယ့္အရွိန္အဝါ ဘယ္ေလာက္ႀကီးေတာ့မွာလဲေလ။ ဒါေတြက ႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္မႈ မတိုးတက္မႈေၾကာင့္လို႔ အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား ကိုယ့္ဘဝကို ဒီထက္ပိုတိုးတက္ေအာင္ လမ္းရွာၿပီး ေဖာက္ရမွာဘဲ။ ေနျခည္ဦးေရ…stay out of comfort zone!Dream Big and #behumble !” လို႔ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္နာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။CeleGabar ပရိသတ္ၾကီးေရ ေနျခည္ဦးကေတာ့ ၾကိဳးစားျပီးရင္ၾကိဳးစားေနတာပဲေနာ္။
Source: Nay Chi Oo
Photo Credit From Nay Chi Oo’s Facebook
” အရာရာကို အပြစ်တင်နေမယ့်အစား ကိုယ့်ဘဝတိုးတတ်မည့် လမ်းပဲရှာပြီး ဖောက်တော့မယ့်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး ”
“ပုရိသ” ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးမှာ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကြီးနဲ့ အပြိုင်သရုပ်ဆောင်ထားကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိနေတဲ့ နေခြည်ဦး ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး Beauty Blogger အဖြစ် စတင်ခဲ့ကာ အနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီး ထူးခြားတဲ့ အနုပညာစွမ်းရည်ကြောင့်လည်း တစ်ခဏအတွင်း အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ သရုပ်ဆောင်သစ်တစ်ယောက်လို့ မထင်ရလောက်အောင် သရုပ်ဆောင်ပီပြင်လွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်ရဲ့ နှစ်သက်အားပေးခြင်းခံနေရပြီး လတ်တလောမှာတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာပါ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိထားပါတယ်။
သူမရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ “ရန်သူ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ တခဲနက်အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။တက်သစ်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ ဝါရင့်အနုပညာရှင်တွေနဲ့အပြိုင် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုကြောင့် “ဧည့်သည်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာဆိုရင်လည်း ရုံပြည်ရုံလျှံ အားပေးခြင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။သူမကတော့ သူမရဲ့အလှကို ယုံကြည်မှုရှိသလို မိန်းကလေးတွေကိုလည်း ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့လှစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဝေမျှတတ်သူ Beauty Blogger ကာင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
နေခြည်ဦးကတော့ တစ်ခုခုကို အပြစ်တင်နေမယ့်အစား ကိုယ့်ဘဝကို ဒီထက်ပိုတိုးတက်အောင် လမ်းရှာပြီး ဖောက်ရမှာကို “ဪ ကိုယ့်ဖြစ်ရပ် ကိုယ်တွေးပြီးတရားရလို့ပါ။ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း နယ်ပယ်မှာ အရှိန်အဝါလေးရလာတိုင်း မာန်တက်နေလို့ မရဘူးဟ။ ကိုယ့်စက်ဝန်းလေးက ကိုယ့်အတွက်တော့ ကြီးရင်ကြီးနေမှာပေါ့ ဒါပေမယ့် စကြာဝလာနဲ့ မနှိုင်းနဲ့ဦး ဒီရပ်ကွက် ဒီမြို့ ဒီတိုင်း ဒီနိုင်ငံကထွက်သွားရင် ကိုယ့်အရှိန်အဝါ ဘယ်လောက်ကြီးတော့မှာလဲလေ။ ဒါတွေက နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်မှု မတိုးတက်မှုကြောင့်လို့ အပြစ်တင်နေမယ့်အစား ကိုယ့်ဘဝကို ဒီထက်ပိုတိုးတက်အောင် လမ်းရှာပြီး ဖောက်ရမှာဘဲ။ နေခြည်ဦးရေ…stay out of comfort zone!Dream Big and #behumble !” လို့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ နေခြည်ဦးကတော့ ကြိုးစားပြီးရင်ကြိုးစားနေတာပဲနော်။
” ေပးထားတဲ့ ကတိေတြမေမ့ဖို႔ ေမြးေန႔မွာ ခ်စ္ရတဲ့ေမာင္ ကိုသတိေပးလိုက္တဲ့ သုသု “
“ရိုင္းစိုင္းတဲ့ဖုန္းဆိုင္၀န္ထမ္းေၾကာင့္ေဒါသထြက္ရေပမဲ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကေျပာလို႔စိတ္ေလ်ွာ့လိုက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ စမိုင္းလ္”
Subscribe Cele Gabar on Youtube
CeleGabar was established in November 2018 and is dedicated to be one of the most dynamic players among Myanmar media. Fulfilling its role asa“The World of Celebrity”, we commit to promote the access to information and knowledge for the public. CeleGabar on average provides more than 500 items per month and contributes to satisfying the public’s right to know.
© 2020 - Cele Gabar. All Rights Reserved.